Guddiga Maaliyadda iyo Waasaaradda Maaliyadda oo ka wada hadlay Miisaaniyadaha 2018 iyo 2019 – Kalfadhi
Guddoomiyaha cusub ee Guddiga Miisaaniyadda iyo Maaliyadda ee Golaha Shacabka, Maxamuud Siraaji, ayaa ka codsaday Wasaaradda Maaliyadda inuu Golaha Shacabka kala shaqeeyo sidii ay Wasaaraddu hor keeni lahayd Miisaaniyadda 2018-ka, oo aan wali la xisaab xirin iyo Miisaaniyadda 2019-ka oo ay tahay inuu Goluhu meel mariyo intaanu curan sanadka cusub.
Arrintaas in wax looga qabto shanta maalin ee soo socota ayuu Guddoomiye Siraaji sheegay iney muhiimad weyn u leedahay shaqada dowladnimada. Wasaaradda Maaliyadda ayaa, in hawshaas looga mira dhaliyo maalmaha kooban ee ka haray sanadkan, u aragta dan qaran oo ay tahay in la dadejiyo, sida uu baahiyey Xafiiska Warfaafinta ee Golaha Shacabka.
Arrintaas waxa ay Guddiga Maaliyadda iyo Wasaaradda Maaliyadda uga wada hadleen kulan ay maanta ku yeesheen Muqdisho, kaas oo ay iskula go’aamiyeen in la dardar geliyo ka shaqeynta xisaab xirka Miisaaniyadda 2018-ka iyo ansixinta Miisaaniyadda 2019-ka, taas oo ay ahayd iney mar hore ka wada shaqeeyaan Xukumadda iyo Golaha Shacabka, balse khilaaf Golaha Shacabka hareeyey darteed ayaa soo gaarsiisay waqtigaan.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa shalay Guddiga Maaliyadda ka saaray Guddoonkii hogaaminayey, waxa uuna ku soo daray xubno cusub, kuwaas oo qaarkood ka mid noqday Guddoonka Guddiga, oo ay isla shalay Xubnaha Guddigu doorteen. Guddoomiye Mursal ayaa faray Guddiga inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uga shaqeeyo Miisaaniyada 2018 iyo 2019.